musha FOOTBALL MANAGER Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane December 1, 2019
LB inopa Nyaya Yakazara Yemaneja wenhabvu anozivikanwa nezita rezita rekuti "Buck Rodgers". Yedu Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Kukura kwaBrendan Rodgers. Image Credits- MuDembaRecord, Twitter, teregirafu uye Memecenter
Kuyerera kunosanganisira yehupenyu hwake hwepakutanga / hwemhuri, dzidzo / basa rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, nzira kune mukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake inotonhora-inomusoro manejimendi maitiro- kugadzira vatambi vake ramba uine bhora uye tamba inoyerera ichipfuura mutambo nebhola rinogara richifamba. Nekudaro, vashoma chete vevateveri venhabvu vanofunga vedu Brendan Rodgers Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Brendan Rodgers akaberekwa pazuva re26th raJanuary 1973 kuna amai vake, Christina Rodgers uye baba, Malachy Rodgers muCarnlough, musha wemahombekombe kuNorth Ireland unoratidzwa pazasi kuburikidza neGoogle Map.
Brendan Rodgers akakurira mumusha wakanetseka weCarnlough. Mufananidzo Chikwereti- Google Mepu uye DailyRecord
Maneja akabudirira wechiRungu neyekuNorth mhuri yemhuri akatanga kukura ari mwana wedangwe wevakomana vashanu vakaberekerwa vabereki vake- Christina (mum) naMalachy (baba). Brendan Rodgers akabva kumhuri yepakati yekumashure yaishandirwa nababa vake avo vaimuita maruva nekushongedza. Ipo baba vake vachibatikana nebasa ravo rekupenda nekushongedza, mai vaBrendan, Christiana akatarisira Brendan mudiki nevanin'ina vake. Dzimwe nguva anozvipinza mubatanidzwa sevazvipiri kusangano revarombo reIrish.
Brendan akakurira achisangana nematambudziko MuCarnlough: Semukomana mudiki wezera 7, Brendan aive pakati pevamwe vana vaiwanzowanzoiswa pasi (vakachengetwa mukati meimba) nekuda kwehuwandu hwehutsotsi hwakakura mumusha wake wainetseka. Vachitaura nezvemhosva, pa4th yaJune 1980, nhengo yeIrish Independent, uye nhengo yeLarne Borough Council, John Turnley akaurayiwa nemhirizhonga yakaitirwa mumusha. Izvi zvakateverwa nerufu rwemutambi weRoyalist, Andrew Mason uyo akarohwa akafa futi nevarume vaviri vemuno mumusha.
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Mumusha unorara weNorth Irish musha weCarnlough, kushaya simba kwakapera kwevakomana vadiki, kusanganisira Brendan apo pakanga paine bhora pamakumbo. Pakusvika pamutambo wenhabvu, mhuri yaBrendan Rodgers yakamiririrwa nenzira kwayo, mune fanbase ye Sheffield Chitatu uye Celtic.
Rodgers akatamba nhabvu panguva yemitambo apo aipinda Vese Saints Katolika Primary Chikoro muBallymena, guta riri kuNorth Ireland- 26 maminetsi 'kutyaira kubva kune yake mhuri kumusha. Kupinda mumitambo yaisave iyo chete chinhu chinomhanya mumhuri. Kare ikako, vabereki vaBrendan Rodgers vaida kuti vakomana vavo vasangowana dzidzo, asi vachitora basa rekusiya basa.
Nepo Brendan akasarudza nhabvu, mumwe wevanun'una vake akatora mimhanzi, sarudzo yakaita kuti mhuri yake yose izvikudze pasina nguva. Waizviziva here? Mhuri yaBrendan Rodgers pamwe chete nekubudirira kwekutanga kwemwana wake mukoma Malachy Jnr uyo akave anozivikanwa nyika uye muimbi wekumadokero.
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Hupenyu hwepakutanga Hupenyu
Nepo hama yake mudiki ainyanya kuita basa rake remimhanzi, Brendan Rodgers akatora nhungamiro yake mukuda kwake kutanga bhora renhabvu. Mushure mekuedzwa kwakabudirira mugore re1984, mudiki Rodgers (akafananidzirwa pazasi) akatanga basa rake rehudiki semudziviriri naBallymena United, timu yake yemuno.
Brendan Rodgers mumakore ake ekutanga achiri mudiki naBallymena. Image Chikwereti- MuDembaRecord
Pamazuva ake ekutamba, Brendan Rodgers akavengwa mumwe murume wemuNorth Irishman Anton Rogan uyo aive 7 makore ake mukuru. Akaita fungwa yakakura kwazvo pabasa rake rechidiki, rwiyo rwakamuita kuti azive mbiri pasi rose kunyangwe asati apedza kudzidza.
Waizviziva here? Achiri mutambi wepachikoro, Brendan Rodgers akadanwa kuzomiririra Northern Ireland padanho reukomana. Kukura kwakadaro pazera repadiki akaona kirabhu yake mu1987 ichimuraramisa kuti ave nhabvu yepamusoro.
Brendan Rodgers Makore Ekutanga neChikoro chake Chechikoro. Image Chikwereti- MuDembaRecord
Rodgers akaramba achifambira mberi nekumaruwa kwake mushure mekupedza kudzidza. Mu1988, akaramba achimiririra Northern Ireland mushure mekunge atamira kuSt Patrick's College achitamba yakanangana nenzvimbo yepamusoro yebhola munyika- Bhuraziri.
Brendan Rodgers akatamba nhabvu nenzira yaanoda kuti zvikwata zvake zvitambe mune imwe nguva apo Northern Ireland yakanga isinganzwe zvachose. Kare ikako, aimbove murairidzi wake aigona kuyeuka kuti aive akazara nesimba rakawanda sei uye zvaionekwa seramangwana rechikwata chikuru chenyika. Kunyangwe zvese izvi mukurumbira, zvishoma Brendan Rodgers aiziva nezve MAZUVA MAZUVA kuuya kwake.
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Iyo Iyo Inorema nzira kuFame Nyaya
Mushure mekushandura nyanzvi neBallymena United, Brendan Rodgers pazera re18 akasainirwa Kuverenga. Waizviziva here? Basa rake rebhora renyanzvi rakauya kumagumo asina kujairika isati yatombotanga nekuda kwechimiro chemabvi ibvi inozivikanwawo se Mhuri osteochondritis dissecans.
Brendan Rodgers akarwara nemhando yemabvi. Mufananidzo Credits- clickittefaq, stack uye MemeCenter.
Pasina mubvunzo, chero mudiki wenhabvu akararama nekukuvara kwakadai, achitungamira kumagumo ebasa achangoziva chete kurwadziwa kwakadzama kwaanogona kukonzera. Zvakatora Brendan Rodgers makore kukurira kushushikana kwepamoyo uye kwepfungwa kwakakonzerwa nechiitiko ichi.
Kutevera kumisikidzwa kwake pamudyandigere, Rodgers akaomeserwa naReason uyo akamupa basa ra Varairidzi vechidiki. Kuti awane ruzivo rwekurairidza, Rodgers akafambira mberi pakudzidzisa vechidiki nhabvu isiri yeligi neNewport (IOW), Witney Town neNewbury. Zvakare, mukuda kuwedzera mari yake shoma semubati wechidiki, Brendan Rodgers akatanga kushanda naye John Lewis zvitoro kutsigira mhuri yake mudiki.
Brendan Rodgers akamboshanda kuJohn Lewis Store kuitira kuti afudze mhuri yake. Mufananidzo Kiredhiti- MemeCenter uye qualtrics
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Akawana sei Rubatsiro kubva Jose Mourinho: Mushure mekuunganidza mari zhinji kuita multitasking semudzidzisi wechidiki uye maneja wechitoro, Brendan Rodgers mune yekupedzisira 1990s akaita sarudzo yekuenda kuSpain kuti awane dzidzo yepamusoro yekurairidza. Mushure medzidzo yake uye achiri akaramba basa rake paKuverenga, akatanga kunyorera mabasa nemakirabhu epamusoro akati wandei, imwe yaive yakagadzirwazve Chelsea FC yaitungamirirwa Jose Mourinho.
Brendan Rodgers mazuva saChelsea Wechidiki Mqeqeshi. Image Chikwereti- Sportskeeda
Waizviziva here? Jose Mourinho akaororwa neBrendan Rodger's CV yake, kuti akamukoka kune vechidiki vechidiki basa rekubvunzurudza iro raakapfuura. Rodgers akasiya basa rake semutevedzeri wemurairidzi paKuverenga kuti atungamire munyika huru yenhabvu, achive mukuru wevadzidzi veChelsea academy mugore re2004.
Jose Mourinho akakurudzira Rodger kuve maneja wechichengeti wemakore mumakore maviri eChipiri chirevo. Uku kusimudzirwa kwakauya nekuti Brendan aive akavimbika kuna sahwira wake (pikicha pazasi) uyo akamupa mukana wekukura.
Jose Mourinho akasimudzira Brendan Rodgers nekuda kwekuvimbika panguva yake mazuva ake neChelsea. Kiredhiti- DreamTeamFC
Following iyo yakakosha Kuenda, Brendan Rodgers akachengeta chinzvimbo ichocho neanotevera ma maneja eChelsea Avram Grant naLiz Felipe Scolari. Mushure mekuwana nguva yakakwana yekukura, Brendan Rodgers akabva kuWatford, kuverenga neguta reSwansea seanodzidzisa musoro.
Kuneguta reSwansea, murairidzi asinganyanyozivikanwa akatanga kugamuchira ruzhinji sekutungamira kwake mukirabhu yeWelsh nendege yepamusoro, iko kubudirira kwakamupa basa re2012 Liverpool. PaLiverpool, Brendan Rodgers akaswedera pedyo kuhwina 2014 Premier League zita. Kunyangwe asina kukunda, akachengetedza Champions League nhabvu yekirabhu (kekutanga mumakore mashanu).
Kutevera kubuda kwaakaita muLiverpool, Rodgers akagadzwa maneja wemaScotland mukombe weCeltic. Pane ku kuora, we- Liverpool nhabvu murairidzi akaenda kubva simba kusvika simba. Iye yakatungamira Celtic mumwaka wakashata wegore rake rekutanga, nekuuputira zvese, tregs mumwaka wake wekutanga miviri.
Brendan Rodgers akakunda iyo treble kaviri kune Celtic- Rukudzo rwake rwepamusoro semaneja. Image Chikwereti- LcFc
Vamwe vese, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Brendan Rodgers akasangana nemusikana wake Sussan panguva iyo anga asisiri-muviri, achangobva kunguva yekukuvara uye sarudzo yekurega kutamba nhabvu. Vaviri vakadanana kweanoda kusvika makore gumi. Brendan akange aine makore 28 paakaroora Sussan mugore re2001 IYO akange achiri muviri-wepasi mukutonga.
Brendan Rodgers mudzimai waSussan achigara achifara pamwe chete vasati varambana. Image Chikwereti- girazi
Susan Rodgers akagara nemurume wake kuburikidza nehuremu uye hutete, kubva panguva yaaive maneja wechitoro paJohan Lewis, kusvika pavakave muchengeti wechidiki weChelsea uye zvakanyanya kukosha, panguva yaakasvika pakukwirira kwebasa rake rekudzidzisa kuLiverpool. Vese vadikani vakaropafadza nevana vaviri kureva; Anton Rodgers (akazvarwa; 26 Ndira 1993) uye Mischa Rodgers. Pazasi pane mufananidzo wevana waBrendan Rodgers kubva kunaSusan.
Sangana naBrendan Rodgers 'vana- Anton uye Mischa Rodgers. Kiredhiti-Nguva & girazi
Waizviziva here? Mwanakomana waBrendan Rodgers, Anton Michael Rodgers akateedzera tsoka yababa vake. Mutambi wenhabvu weIrish uyo anotamba semutambo wepakati akatanga basa rake rehudiki neChelsea FC academy kubva ku2006 kuenda ku2011 uko baba vake vakamudzidzisa.
Dharuro Nyaya: Munguva yekugara kwaRodger kuLiverpool, hukama pakati pake naSussan hwakatanga kupora, kukura uko kwakatungamira pakurwa kurwa kwedare pakati pevaviri ava. Iko kudiwa kwekupa kugadziriswa kwemari kwakaona Brendan Rodgers achipinda muhurongwa hwekurambana -mapaundi akawandisa pamusoro pemhuri yake pfuma empire iyo ine 102 dzimba dzinokosha mamirioniDailyMail Report).
Rodgers akarambana nemukadzi wake Susan mushure memakore 14 ekuroora mugore 2015. Akatsungirira uye akamirira makore maviri asati afunga uye kuroora mukadzi wake achangobva kubatwa Ms Charlotte Searle. Yaive yemuchato we fairytale zvakaitika kuLoch Lomond muScotland mune gore 2017.
Brendan Rodgers akaroora Charlotte kuLoch Lomond gorabhu gungano muScotland. Image Chikwereti- girazi
Brendan Rodgers akaroora Ms Charlotte Searle mu2017 achangopera mwedzi mina paakakurudzira muNew York. Asati aroora, Ms Charlotte Searle aive akarambana akasangana naRodgers iye achishanda sa Liverpool FC murongi wekufambisa uye akange achiri maneja weLiverpool. Zvishoma zvinozivikanwa kana kusangana kwavo kwekutanga ndizvo zvakakonzeresa nyaya dzemuchato waBrendan Rodgers izvo zvakakonzera kurambana nemurume wake waaimbove mukadzi wake Susan.
Charlotte Searle inovimbisa chivimbo mune yega yega snap rake. Iye munhu asingazviratidze uye anoita chero chinhu kunze kwekupa manzwiro ekutsigira murume wake kunyange iwe zvinoreva kuisa hupenyu hwake hwekure uye basa riri kure rakamubata..
Charlotte Searle ainakidzwa nechero chikamu chebudiriro yemurume wake kuCeltic. Image Chikwereti- DailyMail
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva Brendan Rodgers Hupenyu Hwekure kure nenyaya dzebhola raigona kukubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wehunhu hwake. Kure kure negomba, Rodgers anotsanangurwa semurume ane hushamwari, ane moyo munyoro uye anofarira anoda kushamwaridzana neanenge munhu wese- kubva kune wake akavimbika fan kuenda kuneresitoreti waiter.
Kusvika pakuziva Brendan Rodgers Hupenyu hweMunhu kure nebhola. Image Chikwereti: Belfastlive
Rodgers anotenda mune mufaro pane kutsvaga mari kunyange iwe uchichiita icho chiri chakashata zvakaipa. Maererano nemishumo, akamboramba nzira kubva kuna Chikwata cheChinese munguva yezhizha ye2018 yekuudza BBC Scotland “NeChina, imari hombe, asi ini ndawana mufaro pano. "
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Muchikamu chino chekunyora kwedu, tinopa rumwe ruzivo nezvevemhuri yemhuri yaBrendan Rodgers kutanga kubva kuna mai vake.
About Brendan Rodgers 'Mum: Christiana aive nemafungiro akasiyana echiKristu echitendero kubva kumurume wake izvo zvaasina kubvumidza kuve nekukuvadza kwaBrendan nehama dzake. Christina Rodgers aive akazvipira kuzvipira kusvika pakufa kwake mu2010, gore raakatambura nechirwere chemoyo chinorwadza.
About Brendan Rodgers 'Baba: Malachy Rodgers, baba vaBrendan Rodgers aive mugadziri, mushambadzi uye zvakanyanya kukosha, aive mukatorike akazvipira. Akararama uye achitambura neCancer panguva yekupedzisira yehupenyu hwake. Malachy aisakwanisa kutsungirira mushure mekunge mudzimai wake Christiana apfuudza mugore re2010. Akafa kubva pamhedzisiro yechirwere chekenza achangobva mudzimai wake kubva pasi.
Brendan Rodgers Hama: Mumhuri yaBrendan Rodgers inoumbwa nehama dzevanhurume uye sezvambotaurwa, haasi iye ega wemhuri yake akaravira kubudirira. Brendan nemunun'una wake, Malachy Rodgers Jnr vanozivikanwa chaizvo saakabudirira Rodger. Malachy Rodgers Jnr anoratidzwa pazasi akazviitira zita nekuenderera mberi nekutsvaga basa remimhanzi mukati Nashville, Tennessee, Nyika dzakabatana.
Sangana naBrendan Rodgers 'Mukoma- Declan Rodgers. Image Chikwereti- Zuva
Waizviziva here? Nashville-based Malachy Rodgers Jnr anonzi ndiani 'Mal'ane nyeredzi pane yeTV tarenda show'Nyika Inotonhorera'mudzinza rake rekuNorth Ireland asati aenda kuUS (Tennessee) kwaakazova gamba rechinamato. Kune rimwe divi rehupenyu, mumwe wehama dzaBrendan Rodgers anonzi Declan Rodgers haana kuzviita kuti zvive zvakapfuma uye kubudirira. Murombo Declan Rodgers akafananidzirwa pazasi, akamborohwa nekubhuroka mushure mekudzingwa nechikwereti chakakura.
Brendan Rodgers 'akaputsa mukoma- Declan. Chikwereti TheScottishSun
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Brendan Rodgers anoshanda nemabhirioni emamirioni mazhinji akambotambira muripo wakanaka wekubhadhara mari inoita ma8million paakachinjirwa maneja weLiverpool munaGumiguru 2015. Achienderera kuCeltic, akavawo sahwira-anobhadharwa zvakanyanya munhoroondo yekirabhu, achitambira pa- $ 45,000 pasvondo.
Pasinei nezvose izvi mari, Brendan anorarama avhareji mararamiro kunze. Izvi zvinoreva kuti Rodger ane yakasimba kudzika pane maitiro ekuchengetedza mari yake mukutarisa uye kurongeka. Haasi munhu wenhau wevanhu, asina maakaunti (panguva yekunyora) uye achingotarisa basa rake.
Kusvika pakuziva Brendan Rodgers Mararamiro echokwadi. Image Chikwereti- TheHeraldScotland uye CelticNewsNow
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Izvo Zvakaoma 4 Makore Ehupenyu Hwake: Makore anotangira kubva ku2010- 2014 akanzi ndiwo makore anotyisa kwazvo Brendan Rodgers 'hupenyu hwese. Makore iwayo akakomberedzwa nematambudziko emhuri akasiyanisa kudzvinyirirwa kubva mukubudirira kwehunyanzvi (sezvinoonekwa pamazuva ake neLiverpool). Kutanga, kushungurudzika kwemhuri kwakatanga paakarasikirwa naamai vake, ndokuteverwa nababa vake mushure memwedzi mishoma. Kutevedzana kwenhamo kwakaenderera mberi apo Rodger akarasikirwa nemukadzi wake (kuburikidza nekurambana), akarasikirwa nezvinhu zvake (kuti varambe) uye pakupedzisira, achirasikirwa nebasa rake rakakurumbira reLiverpool.
Mudzimai wake wekupedzisira murume wake akatora hupenyu hwake: Brendan Rodgers 'mudzimai mutsva Charlotte Searle aimbove akaroora naSteven Hind, maneja ebudiriro bhizinesi. Vaviri vari kufananidzirwa pazasi vaive vakaroora 17 mwedzi, vaive nemwanasikana pamwechete vasati vapedzisira varambana mu2013.
Mukadzi waBrendan Rodgers's ex-murume akagumisa hupenyu wake mushure mekunge mukadzi wake amusiya. Image Chikwereti- DailyMail
Waizviziva here? Steven Hind akawanikwa akafa mukamuri rake mune yakakurumbira London Bosco Hotel. Waaishanda naye akaona kuti afa mushure mekukundikana kuenda kubasa kwakatenderedza Gumiguru 2017. Iye murume waimbove mukadzi waBrendan Rodgers akatora hupenyu hwake mushure mekunyora katsamba achiti 'akatadza kuenderera'.
Mwanakomana wake akapomerwa mhosva yekuparadza: Achangopera Brendan Rodgers achangoparadzaniswa nemukadzi wake, mhuri yake inhamo yakaenderera. Panguva ino, mwanakomana waRodger (Anton) nevamwe vatatu vanhu vakapinda munyatwa. Vakatora mifananidzo yavo pavakanga vachirova mukadzi achiri kuyaruka, ichi chiito chakazoita kuti vasungwe uye vapomerwe mudare.
Brendan Rodgers Mwanakomana akambosungwa mushure mekurwisa mukadzi. Image Chikwereti- DailyMail
Mhosva iyi inonzi yakaitika kuJury's Inn Hotel iri muBrighton muna Chikunguru 2011. Nokurwadziwa, Brendan Rodgers akatarisa kutongwa kwemwanakomana wake mudare kubva kuimba yeruzhinji. Anton akazosunungurwa mushure mekupomerwa mhosva yeSeal ual, iyo yakanzi nababa vake 'Kunyadzisa'
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.